China Rio square bar table(Teak top) Ukwenziwa kunye neFactory |Tailong
Itafile yebha yesikweri saseRio (Teak top)
I-Rio Stainless steel bar iseti enobumba olula H, isakhelo sentsimbi eyomeleleyo enebrashi yokugqiba unyango, itafile enkulu yeteak slats kunye neentsontelo ezithambileyo zokuluka ezinenxalenye yokuqinisa ngaphakathi, yonke into eyenza ukuba iseti yonke yebar ibonakale ilula, inesibindi, idibanise. eqinile kwaye ethambileyo.Uyilo oluncinci luvumela ukuba lungaze luphelelwe lixesha.Kwaye Ubugcisa obugqibeleleyo buphucula isiseko somgangatho kwizinto ezilungileyo ezikrwada, zilula kodwa zilungile.
ISAKHIWO SESIZINTANSI EZIZINZIYO
Yila ngentsimbi eyomeleleyo engenastainless enebrashi yokugqiba umphezulu, elula kwaye ihlala ixesha elide.Okwangoku, yila nge-I-shaped ukulungisa imilenze yetafile, yenza ukuba izinzile ngokwaneleyo ukusetyenziswa ngokupheleleyo.
ESIPHELELEYO BIG TEAK ITAFILE PHEZULU
Ngobukhulu obuyi-20mm ubukhulu betafile enkulu ye-teak slats, ukumelana noguquko kunye nomhlwa, kunye nokusingqongileyo.Iphunga elikhethekileyo lomthi we-teak likhusela kumonakalo wezinambuzane.
OKUNGAKHETHA UBUKHULU BETHEYIBHILE
Kukho ubungakanani obubini betafile, 70 * 70cm kunye ne-140 * 70cm, kubantu aba-2 ukuya kubantu aba-6.Kukulungele ukuba abantu bakhethe ubungakanani obufanelekileyo betafile, ngokwendawo yabo yangaphandle.
Itafile yeBha yesikwere saseRio (iTeak Top)
Itafile yebha yesikwere
*20mm ubukhulu beteki yaseMzantsi Melika
Itafile yebha yesikwere saseRio
I-1 PC / CTN 709 PCS / 40HQ
ISiboniso seTafile yeBha yesikwere saseRio
Ngaphambili: Isitulo sebha yentambo yaseRio
Okulandelayo: Itafile yebha yoxande eRio (umphezulu weTeak)
Rio auto.itafile yolwandiso (iglasi epholileyo yelitye)
ITheyibhile eNxande emhlophe qhwa ( Polywood)